IPS-TFT MODULES LCD
IPS-TFT MUUQAALKA LCD EE GANACSI TAABAN
TN-TFT MODULES LCD
TN-TFT MUDDADAHA LCD-KA OO GALI TAABAN
KU BARO GUDDIGA WADAHA
Hordhaca beeraha dalabka ee shaashadaha LCD
Waqtiga dhejinta: Oct-25-2021
Bandhigga crystal dareeraha ah waa nooc ka mid ah bandhig fidsan, oo loo isticmaalo bandhigga shaashadaha telefishannada iyo kombiyuutarada. Faa'iidooyinka muujintaani waa isticmaalka tamarta oo yar, cabbir yar, iyo shucaac hooseeya. Guud ahaan, FPD -yada kala duwan ayaa loo kala saaraa hadba cabbirka shaashadda iyo xallinta sawirka. Kala duwan ...Akhri wax dheeraad ah »
Ka hadlida shaashadda awoodda TFT
Waqtiga dhejinta: Oct-19-2021
Sida shaashadda LCD ee ganacsi ee aadka u badan, shaashadda awoodda TFT waxaa lagu arki karaa dhammaan qaybaha nolosha iyo muuqaallo kala duwan. Farsamada shaashadda taabashada oo awood leh ayaa adeegsata soo -gelinta hadda jirta ee jirka aadanaha si ay u shaqeyso. Shaashadda taabashada ee awoodda leh waa shaashad galaas oo ka kooban afar lakab. Dusha gudaha iyo ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee bay kormeerayaasha LCD -ga gudaha u sii horumarin doonaan mustaqbalka
Waqtiga dhejinta: Oct-14-2021
Sidee buu u shaqeeyaa kormeeraha LCD? Mabda'a shaqaynaya ee shaashadda garaaca dareeraha ah ayaa runtii aad u fudud. Waxay soo bandhigtaa midabyo kala duwan iyadoo xiisayneysa saddexda midab ee aasaasiga ah ee cas, cagaar iyo buluug, taas oo soo bandhigaysa sawir cajiib ah. Tani waxay u dhigantaa jahawareer, kaasoo beddelaya xaddiga o ...Akhri wax dheeraad ah »
Habka saxda ah ee lagu iibsado shaashadda LCD
Waqtiga dhejinta: Oct-12-2021
Iyada oo la casriyeeynayo qalabka terminal ee berrinka, soo -saareyaasha aaladaha terminal -ka aad iyo aad u badan ayaa si adag uga shaqeynaya kala -duwanaanta badeecadaha. Taas micnaheedu waa, soo -saarayaasha qaybaha dhexe iyo kuwa hoose waa inay sii wadaan hal -abuurnimada si madax -bannaan si ay ula jaanqaadaan mowjadaha waqtiyada. LCD warshadaha ...Akhri wax dheeraad ah »
Samsung ayaa ganaax lacageed oo dhan 39 milyan oo euro ku bixisay dawladda Holland kadib markii ay kor u qaaday qiimaha TV -ga
Waqtiga dhejinta: Oct-09-2021
Sida laga soo xigtay CCTV News, 29 -kii Sebtember, waqtiga maxalliga ah, sida lagu sheegay warbixin lagu qoray Dutch Times, waaxda macaamilka iyo maamulka maareynta Dutch -ka ayaa ganaax lacageed oo dhan 39 milyan oo euro siisay Samsung Group. Sababtoo ah Kooxda Samsung ayaa kordhisay qiimaha Samsung TV -yada iyagoo farageliyay ganacsatada internetka fr ...Akhri wax dheeraad ah »
Falanqaynta suuqa warshadaha ee Shiinaha 2021: LCD iyo OLED ayaa ah kuwa ugu waaweyn
Waqtiga dhejinta: Sep-25-2021
Iyada oo loo marayo dadaallada aan kala go'a lahayn ee soo -saareyaasha guddiga, awoodda wax -soo -saarka guddi caalami ah ayaa si joogto ah loogu wareejiyay Shiinaha. Isla mar ahaantaana, awoodda wax -soo -saarka guddiga Shiinaha ayaa ku koray heer aad u cajiib ah. Sanadihii la soo dhaafay, waxay sii waday inay hogaamiso capaci wax soo saarka guddiga caalamiga ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Faa'iidooyinka cad ee LCD
Waqtiga dhejinta: Sep-24-2021
Bandhigyada CRT, LCD wuxuu ka adkaadaa cilladaha CRT ee cufnaanta, isticmaalka awoodda, iyo flicker, laakiin sidoo kale wuxuu keenaa dhibaatooyin sida kharash sare, xagal daawasho oo hooseeya, iyo muujinta midabka aan qancin. Si kastaba ha noqotee, xagga farsamada marka laga hadlayo, faa'iidooyinka shaashadda muraayadaha dareeraha ah ayaa weli cad ...Akhri wax dheeraad ah »
Guddida Innolux: Qiimaha suuqa ma fiicna, maaha in la iibiyo
Waqtiga dhejinta: Sep-18-2021
Xigashooyinka guddiyada TV -ga ayaa hoos u dhacay, taas oo shaki ku abuurtay warshadaha guddiyada. Hong Jinyang, oo ah gudoomiyaha soosaaraha gudiga Innolux, ayaa lasiidaayay markii ugu horeysay shalay (17). Bishii Sebtembar, wuxuu bilaabay inuu si firfircoon u hagaajiyo awoodda wax -soo -saarka iyo isku -darka badeecada, sidoo kale wuxuu ...Akhri wax dheeraad ah »
Maxay ku kala duwan yihiin TFT LCD iyo LCD LCD screen?
Waqtiga dhejinta: Sep-13-2021
Maxay ku kala duwan yihiin shaashadda TFT LCD iyo shaashadda LCD LCD? Waxaan ogaaday in dad badani aysan aad u caddayn farqiga u dhexeeya shaashadda TFT LCD iyo bandhigga LCD. Marka hore, farqiga u dhexeeya shaashadda TFT LCD iyo shaashadda LCD LCD? TFT waa mid ka mid ah teknolojiyada bandhigyada badan ee shaashadda LCD ...Akhri wax dheeraad ah »
BOE iyo TCL waxay falanqeeyaan isbeddellada ugu dambeeyay ee suuqa guddiyada hadda ku saabsan waxqabadkooda togan qeybtii hore ee sannadka
Waqtiga dhejinta: Sep-10-2021
Dhawaan, “labada guddi” BOE iyo TCL Technology ayaa sii daayay warbixin sanadeedka 2021-ka. Labada shirkadood waxay gaareen heerkii ugu sareeyey ee rikoorka ah qeybtii hore ee sanadka. Dakhliga BOE wuxuu kor u dhaafay 100 bilyan yuan markii ugu horreysay, macaashka saafiga ah wuxuu kordhay in ka badan 10 jeer sannadkii; TCL Technolo ...Akhri wax dheeraad ah »
Dilaaca! Warshadaha waaweyn ee baakadaha iyo tijaabinta ee Malaysia ayaa la hakiyay muddo toddobaad ah, oo ay ku jiraan macaamiisha sida Infineon iyo ST
Warshadda baakidhka iyo tijaabinta muhiimka ah ee Malaysia ayaa xidhmaysa muddo toddobaad ah Warshadda baakidhka iyo tijaabinta maxalliga ah ee Unisem ayaa Arbacadii ku dhawaaqday inay xidhmi doonto warshaddeeda ku taal Ipoh, Perak kahor Sebtember 15 si looga hortago faafitaanka cudurka taaj -ka cusub. Hakinta ayaa la filayaa inay dib ...Akhri wax dheeraad ah »
Hagaajinta heerka cusboonaysiinta shaashadda ee heerka bandhigga LCD si toos ah u bood!
Waqtiga dhejinta: Sep-06-2021
Midabka, dhalaalka, ama arrimo kale ayaa badiyaa ah shuruudaha lagu iibsado bandhigyada LCD. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu daro tilmaamayaashan caadiga ah, haddii aad rabto inaad hubiso habsami-u-socodka shaashadda, waa inaad sidoo kale tixgelisaa arrin aad u qoto dheer, taas oo ah, cusboonaysiinta shaashadda. Qiimee Saamaynta cusboonaysiinta shaashadda ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay cabbirka iyo rajada suuqa maaddada crystal dareeraha ah, iyo heerka horumarka iyo falanqaynta rajada ee warshadaha maaddada kiristaalo dareere ah
Waqtiga dhejinta: Sep-03-2021
Alaabta LCD Waxyaabaha LCD waa qaybta ugu muhiimsan ee gudiga LCD. Marka la barbardhigo qaybaha sida darawalada IC -yada, polarizers, filtarrada, iwm, maadaama maaddooyinka kiimikada la soo saaray, astaamaha iyo waxqabadka alaabada la dhammeeyay waxay leeyihiin doorsoomayaal gaar ah, mana noqon karaan 100% dammaanad qaada dhammaan b ...Akhri wax dheeraad ah »
Sida loo ogaado wax badan oo ku saabsan IPS iyo TN tft lcd
Waqtiga dhejinta: Sep-01-2021
Farqiga u dhexeeya IPS lcd iyo TN lcd 1. Xadka xagasha daawashada oo kala duwan Sababtoo ah mabda'a waxsoosaarka shaashadda tn, xagasha daawashadu aad uma weynaan karto marka la daawanayo, haddii kale waxa ku jira shaashadda lama arki doono. Tiknoolajiyadda filimka magdhawga filimka ayaa kordhin kara daawashada ...Akhri wax dheeraad ah »
Maxaad u iibsan weyday shaashadaha taabashada LED marka aad doonto? Qaraarku wuxuu saameeyaa iibka
Horumarka joogtada ah ee farsamada, waxaa suuqa ku soo badanaya alaab elektaroonik ah. Intii lagu gudajiray soo saarista alaabada elektiroonigga ah, shirkadaha waa hubaal inay u baahan yihiin inay adeegsadaan shaashadaha taabashada LED. Si kastaba ha noqotee, sahankii suuqa, nooca shaashadda taabashada laguma iibsan karo rabitaan, ...Akhri wax dheeraad ah »
CINNORESCH: Heerka isticmaalka khadadka wax soo saarka ee Shiinaha bishii Luulyo wuxuu ahaa 95% TFT-LCD iyo 53% AMOLED
Waqtiga dhejinta: Aug-28-2021
TFT LCD GLASS MATERIAL Float Sida laga soo xigtay CINNOResearch ee warshad guddi bille ah oo u xilsaartay xogta sahanka, bishii Luulyo 2021, celceliska heerka isticmaalka warshadaha guddiyada LCD ee gudaha ayaa ahaa 95%, kaas oo celceliska heerka adeegsiga ee khadadka jiilka hoose (G4.5 ~ G6) wuxuu ahaa 92.2%. Bishii Juun, waxay ku ...Akhri wax dheeraad ah »
Xor baad noo tahay inaad nala soo xiriirto. Waxaan mar walba diyaar u nahay inaan ku caawino.
3/F, Dhismaha 3aad, Beerta Warshadaha Jia'anda, Degmada Longhua, Shenzhen, Shiinaha
Hadda na soo wac: 18146681518